२०७८ भाद्र २७, आईतवार १८:३४
सन्जिप तिम्सिना-धनले एउटै कोखका दाजुभाईलाई पनि अलग बनाइदिन्छ । त्यही कारण हाम्रो समाजमा उखान चलेको छ, ‘धनको मुख कालो ।
सानै उमेरदेखि हामीलाई भनियो कि, धन भनेको ठूलो कुरो होइन । तर, जब हामी व्यवहारिक जीवनमा प्रवेश गर्‍यौ, हामीलाई धनको खाँचो पर्‍यो ।
धन अर्थात समृद्धि : हाम्रो पूर्विय संस्कार अनुसार बर्षभरमा विभिन्न चाडपर्व मनाउँछौ, त्यसमध्ये एक हो तिहार । तिहारलाई लक्ष्मीपूजा पनि भनिन्छ । लक्ष्मीलाई धनकी देवी मानिन्छ ।
धन के होइन ? : एकातिर जीवन चलाउन धन अपरिहार्य भनेर भोग्दै र बुझ्दै जाँदैछौ, अर्कोतिर धन ‘केही होइन’ भन्ने आवाज पनि सुन्दैछौ ।
धन नै सुखको स्रोत पनि होइन । भनिन्छ नि, निद्रा मिठो कि ओछ्यान ? जवाफ, निद्रा । भोक मिठो कि भोजन ? जवाफ, भोक । भौतिक बस्तु नै जीवनको पर्याप्त होइन भन्ने कुराको दृष्टान्त हुन् यी । त्यसैले हाम्रा पूर्खाहरुले भन्दै आए, ‘धनप्रति आशक्ति नराख्नु ।’
धनको भोक : धन भनेका हाम्रा भौतिक आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्ने साधन हुन् । यी आफैमा साध्य होइनन् । यी आफैमा उपलब्धी होइनन् । त्यसैले अन्धदृष्टि लगाएर धन आर्जन गर्ने जुन लालसा राखिन्छ, त्यसले हामीलाई सधै अतृप्त बनाउँछ । सधै असन्तुष्टि बनाउँछ ।
किनभने धन पाउने लालसा कहिल्यै मेटिदैन । जति कमाउँछौ, उत्तिनै त्यो भोक जाग्दै जान्छ । धनको भोक भयानक पनि हुन्छ । जब जब हामीले धनलाई आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्ने बस्तुभन्दा माथि ठान्छौ, तब हामीभित्रको मनावियता हराउँछ ।
धन एक साधन : दैनिक जीवन-यापन गर्न धन चाहिन्छ । कतिपय भौतिक आवश्यक्ता पुरा गर्न धन चाहिन्छ । तर, धन नै सबैथोक हो भनेर लम्पट भएर लाग्दा त्यसले हाम्रो जीवनको रस खोसिदिन्छ । जीवनको सुगन्ध खोसिदिन्छ । जीवनको सौन्दर्य खोसिदिन्छ ।
धन ता मन हुने हरूको हो , धन जति कमाय पनि भो अब पुगो भन्दैनन् कहिले पनि मानिसले जति धनी भयपनि धन कमाउन छोढ्दैनन् । धनी धनी हुँदै जान्छ , गरिब गरिबको भेषमा हुन्छ समाजमा यस्तो छ ।
त्यो भनेको मानिसको आफ्नो व्यक्तिषत ठाउँमा पर्छ , धन कमाउन मानिसले मानिसनै मार्छन् यस्तो छ समाज । मान्छेलाइ बेचो शरिरका अङ्ग बेचो धन कमायो धनी भयो , गरिब गरिबको भेषमा नै हुन्छ । के कति कुरा धेरै गर्नु धन कमाउन मानिसको विषयमा धनको विषयमा जति कुरा गरे पनि बढ्छ् , जति कुरा बढायो त्यहि कुरा बढ्छ ।